Zvakanakira kuita SEO paYouTube yeecommerce | ECommerce nhau
Zvakanakira kuita SEO paYouTube yeecommerce
Encarni Arcoya | | evanhu vezvenhau
Kusvikira vashandisi kuburikidza nemavhidhiyo fomati iri kukura tsika. Muchokwadi, mushure meye coronavirus denda, mavhidhiyo akawedzera iwo maonero. Kana isu tichiwedzera kune izvo izvo Google inoona audiovisual zvemukati zvakanaka kwazvo, inofanirwa kutariswa kune yako eCommerce. Zvino, iwe unofanirwa kuita yakanaka SEO kuYouTube kuti uwane mibairo yakanaka.
Kana iwe uchida uzive maitiro ekuita SEO paYouTube, iyo chikonzero nei tichiikurudzira, uye maitiro ayo vashandisi vako anozodanana nawo, saka usamire kuverenga izvo zvatakakugadzirira.
1 Nei kuve neYouTube chiteshi cheCommerce yako iri zano rakanaka
2 Nei YouTube ichivandudza SEO yako eCommerce
3 SEO Matekiniki eYouTube: Muite kuti adanane neCommerce yako!
3.1 Ongorora vavariro yako vateereri
3.2 Kutsvaga kwemazwi
3.3 Gonesa musoro wenyaya uye tsananguro yevhidhiyo yega yega
3.4 SEO paYouTube: Matagi
3.5 Ive nekuchengera nemhando yezviri mukati
Nei kuve neYouTube chiteshi cheCommerce yako iri zano rakanaka
Paunovhura online chitoro, eCommerce, chinhu chekutanga chaunofunga ndechekuti iwe unofanirwa kutarisa kupa webhusaiti iyo iri nyore kufamba uye inokwezva sezvinobvira. Uye ndizvozvo. Asi iwe unofanirwa kuziva kuti mazuva ano zvirimo zvinofamba paInternet, mune makumi masere muzana ezviitiko, zviri kuburikidza nevhidhiyo. Izvi zvinoreva kuti zvisinei nekuti yakanaka sei eCommerce yako, kana zvisingazivikanwe hapana chaunowana.
Naizvozvo, kushandiswa kwenzvimbo dzekudyidzana. Asi, imwe yeayo atinoterera zvakanyanya ndeyeYouTube. Uye zvakadaro nhasi ndiyo iyo inogona kukupa iwe zvakanyanya mabhenefiti.
Zvisinei. Isu tinoziva kuti eCommerce inogona kunge isina chitoro chemuviri, uye nekudaro haugone kunyora mavhidhiyo mazhinji ezvo. Iwe unogona kunge usina kana zvigadzirwa, nekuti iwe wakashandira imwe kambani kuti itarisire kutumira izvo zvigadzirwa, uye iwe wakangosanganisa chete iyo catalog yeiyi. Muzviitiko izvi, zvinowedzera kuoma kupa zvirimo zvinoonekwa. Kana kwete.
Wadii kuratidza kushandiswa kwezvigadzirwa zvauinazvo zvekutengesa? Wadii kutaura nezvenyaya dzine chekuita neyako eCommerce musika? Iwo matimu epakutanga asingatarise zvakanyanya pa "tenga, tenga, tenga", izvo zvinowedzera kukosha uye izvo zvinopa kutendeseka kukuru kune yako eCommerce.
Uye ichi chatova chikonzero chekubheja kuve neYouTube chiteshi. Asi, kuti uishandise uye iite kuti ishande, iwe unofanirwa kuziva maitiro ekuita yakanaka SEO paYouTube.
Nei YouTube ichivandudza SEO yako eCommerce
Iwe unofunga kuti kudzidza kuita SEO paYouTube hakusi kuzokanganisa chero chinhu muCommerce yako? Zvakanaka chokwadi chakatosiyana.
SEO chokwadi inounza iwe pasi mumugwagwa wekuvava. Icho chinhu chakaomarara zvekuti hautombopedza kuziva zvaunofanirwa kuita kuti ubatsirwe nacho uye nekuvandudza nzvimbo yako. Uye kana tikawedzera pane izvozvo, pazvinoita sekunge unozvitonga, mitemo inochinja uye vanokupengesa nekuti havakuudze zvavakachinja, zvinhu zvinozosviba.
Asi chokwadi ndechekuti nhasi audiovisual zvemukati ndeimwe yeinonyanya kudiwa neGoogle uye iri kusimudzira pamusoro pezvimwe zvirimo. Nekudaro, nemavhidhiyo iwe unozosvika pakuonekwa kukuru, izvo zvinoshandura mukushanya kwakawanda kune yako eCommerce. Muchokwadi, kana iwe waita yakanaka SEO hunyanzvi paYouTube, uye iri muCommerce yako, unogona kuwana zvakati wandei zvakwakanakira pamusoro pevanokwikwidza.
Pakati pezvimwe zvinhu, neYouTube uchakwanisa kuvaka chinongedzo kuvaka mahara, Ndokunge, iwe unogona kuisa zvinongedzo kune yako webhusaiti kana zvemukati uye Google ichaiona nemaziso akanaka. Unogona zvakare kuisa mavhidhiyo ane chekuita nemusoro wenyaya wauri kubata nawo. Uye kana iwe uchitozvimisikidza semunhu anokurudzira, une zvakawanda zvekuhwina.
SEO Matekiniki eYouTube: Muite kuti adanane neCommerce yako!
Iye zvino zvaunoziva zvakawanda nezveSEO paYouTube, hatidi kusiya chidzidzo tisati tatanga tataura nezve iwo matekiniki anogona kukubatsira kuti vashandisi vako veCommerce vadanane. Ehezve, kana iwe usina online chitoro, hazvireve kuti haugone kuzvishandisa, kutaura zvazviri, zvinoshandiswa kune chero chiteshi cheYouTube.
Ongorora vavariro yako vateereri
Kumwe kwekukanganisa kukuru kwatinoita kufunga kuti chiteshi chedu chinogona kufarira munhu wese. Haisi chokwadi chaicho. Semuenzaniso, fungidzira chiteshi chetoyi. Ichafadza vana nemhuri dzine vana. Asi vaviri vakaroora vasina vana havazokwezvwa kumatoyi (kunze kwekunge vari vateresi kana zvakafanana)
Naizvozvo, zvakakosha kuti tsanangura izvo vateereri vako vanozove, nekuti nenzira iyoyo iwe unogona kutarisa zvakanyanya pavari.
Iwe unofanirwa kuziva kuti ndeapi mazwi akakosha ekuti uwane zvemukati. Uye iwe unogona kuita izvi nenzira mbiri dzakasiyana:
Kudzidza makwikwi ako uye nekuona iwo mazwi akakosha avanoshandisa kuita zvakafanana. Nenzira iyoyo iwe unokwira kumusoro zvigaro uye uchakwanisa kuisa chiteshi. Asi kwete kuti zvisiyane, ziso.
Kutsvaga mazwi akakosha asina kunyanyo shandiswa. Hongu, zvinotora nguva yakati rebei, asi pachave nemusiyano kune vakwikwidzi, izvo zvinogona kukwezva, mukati mevateereri vako, vamwe vanhu vanozoenderera nekuvandudza nzvimbo dzako.
Kurudziro yedu? Ita zvese. Mazwi akakosha aunoziva anoshanda uye edza matsva kuti uone kana iwe ukawana mhedzisiro.
Gonesa musoro wenyaya uye tsananguro yevhidhiyo yega yega
Nemazwi akakosha awakawana, iwe unofanirwa kuvaka zita uye tsananguro yemavhidhiyo.
Kana chiri chemusoro wenyaya, chinhu chakanakisa ndechekuti isa mazwi akasimba mairi, asi uchigadzira mitsara inokwezva kutarisa, inogadzirisa matambudziko evashandisi, nezvimwe. Semuenzaniso, fungidzira kuti waita vhidhiyo yeorchid transplant. Kazhinji muGoogle iwe waizoisa izvo mune yako yekutsvaga injini, asi zita rakadai harisi kuzokwezva kutariswa. Kune rimwe divi, kana iwe ukaisa "Maitiro ekuita iyo orchid inoshandura iyo inochengetedza chako chirimwa kubva kune imwe kufa" zvinokwanisika kuti iwe uchave uine vakawanda vateereri.
Pane rondedzero, iwe unofanirwa kuisa mavara angangoita mazana mashanu, kwaunorondedzera zvakanyanya sezvinobvira kuti vhidhiyo iyi ndeyei. Ikoko ndiko kwaunofanirawo kusanganisira mazwi akakosha uye kunyange kuwedzera chinongedzo (semuenzaniso kune yako eCommerce).
SEO paYouTube: Matagi
Matagi, sekudyidzana pasocial network, ave kubatsira zvikuru nekuti nawo unobatsira vashandisi kukuwana. Zvisinei, hazvina kunaka kuwedzera-kuwedzera chikamu ichi, nekuti unogona kuwana mhedzisiro. Kuti uite izvi, bheja pane mazwi akakosha uye mazwi ane chekuita nezvakanyorwa iwe zvawatumira.
Ive nekuchengera nemhando yezviri mukati
Vhidhiyo isina kunyorwa, isinganzwiki, uye isina kunyatsogadziriswa haishande kugadzirisa SEO paYouTube kana kuisa chiteshi chako cheCommerce. Unofanira kumupa imwe mhando kuvhidhiyo yako, kuwedzera kune iyo ruzivo inovashandira chaizvo kune chimwe chinhu. Zvikasadaro, hazvizofadze chero munhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » evanhu vezvenhau » Zvakanakira kuita SEO paYouTube yeecommerce
Ndezvipi zvekutengesa fannels